ခြူးလေး သည် ယခင်က နေအဉ္ဇရာဟု သိခဲ့ကြပြီး၊ MRTV-4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများ၌ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် လူသိများလာသော မြန်မာ သရုပ်ဆောင် ဖြစ်သည်။ မိုးပန်းပွင့်ရဲ့သင်္ကေတ ရုပ်ရှင်၌ ဇာတ်ရုပ်ကျအောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်မှုကြောင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မြန်မာရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲတွင် အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုအတွက် လျာထားခံရသည်။
1. အစောပိုင်းဘဝနှင့် ပညာရေး
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့၌ ၁၉၉၃ အောက်တိုဘာ ၅ တွင် ခြူးလေးကို မွေးဖွားသည်။ အမည်မှာ စန်းသော်တာ၊ မွေးချင်းနှစ်ယောက်အနက် အကြီး ဖြစ်ကာ၊ မောင် ရှိသည်။ အင်းစိန် အမှတ်၄အခြေခံပညာအထက်ကျောင်း၌ ပညာသင်ယူသည်။ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာအထူးပြုဖြင့် ဘွဲ့ရသည်။
2.1. အနုပညာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃: ပွဲဦးထွက်ကာလ
၂၀၁၂ တွင် မျက်နှာသစ်သရုပ်ဆောင်ရွေးချယ်ပွဲ ဖြစ်သော ပျော်ရွှင်စရာသရုပ်ဆောင်ကမ္ဘာ ၌ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည်။ ထို့နောက် MRTV-4 ရုပ်သံနှင့် ငါးနှစ်စာချုပ် ချုပ်သည်။ ကြယ်တာရာတိုက်ပွဲ ရုပ်ရှင်၌ သရုပ်ဆောင်သင်တန်းမှ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ပွဲဦးထွက်လာသည်။ ၎င်းနောက်၊ ဟိန်းဝေယံအပြိုင် အင်တင်တင်ဂွင်၌လည်းကောင်း၊ ပြေတီဦးနှင့်အပြိုင် Twist ၌လည်းကောင်း သရုပ်ဆောင်သည်။
2.2. အနုပညာ ၂၀၁၄: ရေပန်းစားမှု
၂၀၁၄၊ သူမ၏ ၂၀၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ MRTV-4 မှ ထုတ်လွှင့်သော ပွဲဦးထွက် ရုပ်သံ ထာဝရမန္တလေး ၌ သရုပ်ဆောင်ရာ၊ အောင်မင်းခန့်၊ ဟန်လင်းသန့်၊ အောင်ရေချမ်း၊ မေမီကျော်ကျော်တို့နှင့်အတူ အဓိကဇာတ်ရုပ်တွင် ပါဝင်သည်။ ဤဇာတ်လမ်းတွဲသည် မြန်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲသမိုင်းတွင် အကြီးအကျယ် အောင်မြင်မှု ရရှိသည်။ နောက် ဒုတိယရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်သော ပန်းနုသွေး ဇာတ်ထုပ် ၂၌ ပါဝင်ရာ၊ ထိုနှစ်မှာပင် MRTV-4 က ထုတ်လွှင့်သည်။ ထိုတွင် သူ့ဇာတ်ရုပ်ဖြစ်သော ခြူးလေးကို ဝိုင်းဝန်း၍ အားပေးကြရာ၊ လူအများပါးစပ် ရေပန်းစားလာသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူ့အမည်ကို နေအဉ္ဇရာမှ ခြူးလေးဟု ပြောင်းသည်။
2.3. အနုပညာ ၂၀၁၅-မျက်မှောက်: ရုပ်ရှင်ကားကြီး၌ ပါဝင်ခြင်း
၂၀၁၅ တွင်၊ ဟန်လင်းသန့်၊ မေမြင့်မိုရ်တို့နှင့် အပြိုင် မိုးပန်းပွင့်ရဲ့သင်္ကေတ ဇာတ်ကား၌ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာ၌ ဦးစွာ သရုပ်ဆောင်လာသည်။ ၂၀၁၈ စက်တင်တာ ၁၄ ၌ ရုံတင်ပြသရာ၊ ၂၀၁၈ မြန်မာရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ၌ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုအတွက် စကာတင်စာရင်း ဝင်သွားသည်။
ထို့နောက် လူရည်ချွန် ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆ တွင် ပို၍လှသောမနက်ဖြန် ၊ ကံကံ၏အကျိုး ၊ ၂၀၁၈ တွင် ရသမော်ကွန်းအလင်္ကာ ၊ ရွှေဖူးစာဆုံရာမြေ ၊ Happy Beach: Season 2၊ ၂၀၁၉ တွင် ချစ်ရပါသောနွေ ၊ နွေလယ်ညရဲ့လမင်း ဟူသော မြောက်များလှသော ရုပ်သံစီးရီးများတွင် ပါဝင်လာသည်။ ၂၀၁၉ တွင် ကျော်ကြားအမွှေစိန်ဝိဉာဉ် ၊ ၂၀၂၀ တွင် သောင်းတိုက်ကကြားစေသား ရုပ်ရှင်တို့တွင် ပါဝင်သည်။ စာရေးဆရာမ ခင်နှင်းယု ရေးသော နာမည်ကျော် ဝတ္ထုဖြစ်သည့် သရဖူ ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ပါဝင်သည်။